C/raxmaan Tuuryare iyo milkiilaha idaacadda Shabeele oo dhexmartay hadal shaki keeni kara (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/raxmaan Tuuryare iyo milkiilaha idaacadda Shabeele oo dhexmartay hadal shaki keeni kara (DHAGEYSO)
Taliyihii hore ee nabad-sugidda qaranka Soomaaliya, haatanna ah la-taliyaha wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/raxmaan Maxamed Tuuryare iyo milkiilaha idacaadaha Shabeele C/maalik Yuusuf Maxamuud ayaa habeenkii xalay hadalo ay isku dhaafsadeen qadka teleefanka, isku badashay in Tuuryare uu ku hanjabo inuu talaabo deg deg ah qaadi doonno.
Milkiilaha idaacada Shabelle C/maalik Yuusuf Maxamuud oo qadka teleefanka kula xiriiray taliyihii hore ee NISA C/raxmaan Tuuryare ayaa sida muuqatay doonayay inuu uga jawaabo waxa ka jira warbixin ay idaacadda Shabeele baahisay.
Warbixintaasi ayaa ahayd mid looga hadlaayay guri ay leedahay wasaaradda gaadiidka oo kiro ahaan ku deganayd idaacadda Shabelle balse idaacadda si qasab ah looga saaray sanadkii 2013-ka, kadibna la dejiyay taliyihii hore ee NISA C/raxmaan Tuuryare.
Halkaan ka dhageyso warbixinta ay Shabeele ka baahisay Tuuryare
C/raxmaan Tuuryare ayaa sida la sheegay ah shaqsi uu adeer u yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuuna haatan la-taliye u yahay wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Su’aal C/raxmaan Tuuryare laga weydiiyay arrintaasi ayaa ku jawaabay inuu shaqsi ahaan haatan degan yahay guri dowladeed balse uusan deganayn guri ay leedahay Idaacadda Shabeele.
Si kastaba oo ay ahaataba, C/raxmaan Tuuryare ayaa hanjabaadiisa laga yaabaa inay ka dhex faa’ideystaan qolooyin kale, iyadoona hanjabaadaan ay kusoo beegmayso xilli dhawaan wariye u shaqeeynayay idaacadda Shabelle oo lagu magacaabi jiray C/casiis lagu dilay magaalada Muqdisho.
Hoos ka dhageyso hanjabaada uu jeediyay C/raxmaan Tuuraye